LAZA ADINA BAKALOREA : « Tsy teto Mahajanga no nipoiran’ny fanaparitahana mialohan’ny fanadinana »
Io no nambaran’i dokotera Rakotovelo Géoslin, filohan’ny foibem-panadinana etsy aminy lysea Philibert Tsiranana raha nampiantso mpanao gazety ny ofisy miadidy ny bakalorea eto Mahajanga ny tolakandro ny alakamisy 03 oktobra teo tao ao amin’ny ivon-toeran-tsekoly niadidiany. 4 octobre 2019
Miaramila maromaro no nanao fiambenana ny laza adina nanomboka tany Antananarivo niaingan’izany ka hatramin’ny toerana nihazonana azy tao amin’ny tobin’ ny zandary Jean Phillipe Mahajanga. Ny takarivan’ny alahady teo no nanamarina ny fahatongavan’izany tao anaty baoritra lehibe misy azy na ilay antsoina hoe "deballage" ny tompon’andraikitra maromaro voakasiky ny fiadidiana ny fanadinana teto an-toerana.
Nohamarinina ny isan’ny fatorana, raha ny marainan’ ny alatsinainy dia nanao fanapariahana izany teny amin’ireo foibem-panadinana isan-tokony avy ny tompon’andraikitra niaraka tamin’ireo mpitandro filaminana nanao ny fiambenana ny laza adina. Vantany vao tonga teny amin’ny toeram-panadinana ireo laza adina dia mbola ny mpitandro filaminana avy ao amin’ny borigadin’ny zandary ihany koa no nanokatra ny baoritra mbola tsara fono, fa tsy ny lehiben’ny foibem-panadinana, hoy hatrany ny fanazavana voarainay.
Voamarin’ny minisitera araka ny fanambarana ofisialy fa nisy kosa ny fiparitahan’ny laza adina mialohan’ny fotoana tany amin’ireo toerana sasantsasany teto Madagasikara. Tsy tokony hisy fiatraikany amin’izay mety ho vokatry ny fanadinana bakalorea amin’ity taona ity izany, hoy ireto farany, satria efa tratra ny tanjona dia ny hanitsy ireo ankizy mpianatra nahita io laza adina mialohan’ny fotoana io. Koa efa nilamina ny fanatanterahana ny fanadinana ary tsy eken’ny fanjakana ireo izay minia hamboly korontana manoloana iny tranga anankiray iny, satria efa am-polony izao ireo olona voasambotra voakasika ny raharaha.
Azo adika fa famotehana ny tontolon’ny fampianarana eto Madagasikara sy ny hoavin’ny firenena iray manontolo ireny fiparitahan’ny laza adina niteraka resabe teto amintsika ireny. Ka tokony hosaziana mafy ary esorina aminy ireo diplaoma sy laharam-boninahitra misy azy, raha toa ka voamarina ny fiampangana ho tompon’antoka na mpiray tsikombakomba tamin’izao tranga izao izy ireny, hoy i dokotera Rakotovelo Géoslin sy i dokotera Vavindraza, filohan’ny ofisy miadidy ny bakalorea ato anatin’ny faritanin’i Mahajanga.